Home Wararka Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka (FEIT) oo maanta tagaya Baladweyne.
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka (FEIT) oo maanta tagaya Baladweyne.
Xubno katirsan Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Federaalka (FEIT) ayaa maanta lagu wadaa lagu wadaa in ay tagaan Magaalada Baladweyne xarunta Gobolka Hiiraan si ay u kormeeraan goobaha lagu qabanayo doorashada Golaha Shacabka BFS.
Ilo ku dhaw safarka xubnaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka federaalka ee Baladweyne ayaa warbaahinta u sheegay in socdaalkooda ay ku wehlinayaan xubno katirsan Guddiga hirgelinta Doorashooyinka heer Dowlad-Goboleed.
Magaalada Baladweyne oo ah goobta labaad ee Hir-Shabeelle lagu dooranayo Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad ku metalaya Aqalka hoose waxaa ku yaalla goobo loo diyaariyay in ay ka dhacdo Doorashada.
Wafdiga ayaa qiimeyn ku sameynaya xarumaha ay tagaan si ay u hubiyaan in ay mudan yihiin ku qabashada Doorashada Golaha Shacabka, warbixin dhanka Amniga ayay ka dhageysanayaan Saraakiisha ammaanka ee Soomaalida & kuwa AMISOM.
Guddoomiyaha Guddiga hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Heer Federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in maalmaha soo socda la xareynayo Ergada Beelaha si loo siiyo tababar kooban iyo kaararka aqoonsiga.
Rejo ayuu ka muujiyay in la bilaabo Doorashada Golaha Shacabka BFS, Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Federaalka waxa uu ka dalbaday in uu ku dhawaaqo